Sarkaalka Gaadiidka-Sen Madaxweynaha Cankesen "TCDD annaga ayaa na leh" | RayHaber | raillynews
HometareenkaNidaamka Isgaadhsiinta ee IntercitySarkaalka Gaadiidka-Guddoomiyaha Guddiga Cankesen C TCDD Dhamaan annaga Ulaşma
Sarkaalka Gaadiidka-Sen Chairman Can Cankesen, Tekirdag, oo ku dhow magaalada magaalada Corlu iyo 24 iyo dhimashada 318 ee ku dhaawacmay shilka tareenka ee website-ka rasmiga ah ee ururka.
Hadalka Madaxweyne Cankesen waa sida soo socota;
08 July Habeenkii 2018, shil culus oo tareen ah ayaa ka dhacay aagga Tekirdağ / Çorlu-Sarilar. Labaatan iyo afar qof oo ah muwaadiniin / walaalayaal / dad ah ayaa la dilay kadib shilkii. Waxaan jeclaan lahayn inaan u dulqaadanno kuwa naftooda ku waayay shilka, sabirka ah ee qoysaska naxariista leh ee Alle iyo dhaawaca degdegga ah ee dhaawaca.
Sarkaalka Gaadiidka ee Sen,
Sida ugu dhakhsaha badan ee aan u maqalnay shilku, waxaan u soo guuray goobta aan la joogno saaxiibaday.
Waxaannu tagnay 02.30 habeenkii halkii shilka.
Helitaanka goobta shilka ayaa waxaa mamnuucay saraakiisha militariga iyo amniga.
Markii aan soo sheegnay aqoonsigeena asal tareen iyo jaaliyada rayidka ah, waxaan gaarnay mawqifka uu shilku ku dhacay isagoo ka soo horjeeda waddada wasakhda ah iyo wasakhda halkaasoo aanay baabuurtu iman karin.
Waxa ugu horreeya ee isha ku haya sida ugu dhakhsaha badan marka aan gaarno goobta shilka;
Laydhadh ee taxanaha tareenka iyo ruxruxaha gadaashooda ah laguma daboolin, laakiin shan baabuur, labaad iyo lixaad, ayaa la duubay oo la afduubtay.
Xaaladda degdegga kadib;
Waxa ay ahayd in dhammaan xarumaha dowladdeena la abaabulay, iyo in dhammaan hay'adaha, caafimaadka, badbaadada, samatabbixinta, dhammaan unugyada ay halkaas joogeen, oo ay la socdaan UDHB, Maareeyayaasha Guud ee TCDD iyo dhammaan qaybaha la xiriira.
Dawladeenu waxay faragelisay shilkan gacan-ka-hadalka dhamaanteed awoodeeda waxayna dadaal ugu jirtey raadin / samatabbixin si tartiib tartiib ah si ay u aragto haddii aan walaalkeen kale badbaadin karno tartanka.
Markii aan tagnay goobta shilka, waxaa la qabsadey gaari gacan-qabsi ah / hawl-galin oo la qaaday iyada oo gacan ka heleysey kiriimyada, siddeed qof oo kale ayaa laga sii daayay baabuurta.
Waxay ahayd dareen aan macquul ahayn oo lagu tilmaamayo murugada kuwa ku noolaa halkaa iyo waqtigaas.
Shaqada ayaa si joogto ah u socotay ilaa 06.00 subaxdii.
Si kastaba ha noqotee, kooxaha raadinta iyo samatabbixintu way dhammeeyeen shaqadooda markii la xaqiijiyay in aysan jirin qof ka tagay oo dhaawacmay.
Haddii aan eegno meesha uu shilku ku salaynayo NGO-yada,
Sarkaalka Gaadiidka-Sen, adiga ayaa ah kan ugu horreeya oo keliya;
Markii aan waydiinnay sida ay u dhacday shilkan;
Waxaa jira roobab dhexdhexaad ah oo u dhexeeya aag aad u gaaban oo u dhexeeya 15.30 iyo 16.00,
Waxaa jira roobab aad u sarreeya oo mitirka square ku wareegsan 32 kg,
Waxa kaliya ee ka dib markii roobabkan ku yaala aagga Corlu / Sarilar oo ah culeyska meesha uu shilku ka dhacay ay ku dhaawacmeen roobab,
Dheecaan soo noqnoqda jidadka iyo jiifka waddada oo ka dhalanaysa dhammaan shuruudaha sameynta shilka,
Waxaan ka bartay masuuliyiinta in shilku dhacay intii lagu jiray tareenka.
Faahfaahin kale oo soo jiidatay qorraxda qorraxdu waxay ahayd miraha gabbaldayaha / goobaha Gunebakan iyo dhirta iyo beeruhu waxay ahaayeen mitir biyo ah.
Sawiradaas iyo masiibooyinka dabiiciga ah ee dhacaya waxaa jirey shaxan sawir ahaan iyo sawirro lagama maarmaan ah.
Ka dib markay arkeen sawiradaas iyo kuwa culeyska ah, waxaan ka tagnay rabitaanka masiibooyinka dabiiciga ah aan mar kale dhicin, iyo in midkoodna aan waxyeello lahayn.
Inkasta oo ay dhacdadu wali ahayd mid cusub, dhibaatadeenuna waa mid cusub, wuxuu bilaabay inuu si daacad ah u turjumo musqulaha loo yaqaan "railway", oo qoran iyo muuqaal ah, isagoo aan wakhti ka danbeeynin dhacdadan.
Inkastoo xanuunka badan ee walaalaheena ku dhimatay shilka, dhaawacyada iyo dhaawaca ay wali yihiin kuwo cusub, waan u dhaafayaa si aad u qadarinayso haddii ay jirto baahi loo qabo in la raadiyo "Hal Cinnesiin, Hal Hin iyo sidii waagii hore ay soo waceen.
Ansaximadayda, ma jirto fikrad ah inaad sameyso mudnaanta xanuunka.
Dhamaan mas'uuliyiinta ka hor iyo kadib shilka iyo heerarka kala duwan ee gobolkeenu waxay ku jirtaa helitaanka.
Waa maxay dhacdada shilka iyada oo aan hakinaynin dawladeena, dayacid, ula kac ah, iwm. Ma jiraa xaalad? Wuxuu magacaabay lix xeer-ilaaliye oo bilaabay baadhitaanka iyo baaritaanka ...
Haddii ay jiraan wax dembiile ah ama dayacaad ah dhacdada,
Fikradayda, ma jirto baahi loo qabo in la isku dayo in uu isa soo taago ama awoodda uu u taagan yahay horbood iyo in la burburiyo shakhsiyaadka iyo hay'adaha ayadoo loo marayo dilalka aan sharciga waafaqsaneyn.
Waqtiga dhibaatooyinka noocan oo kale ah, waxaan u baahannahay inaanan ahayn fikrado xun iyo jinni, waxaanan u baahanahay midnimo iyo midnimo.
Dhamaan hay'adaha dowladdeena waa kuwo noo ah. "TCDD waa mid ka mid ah hay'adahan."
TCDD-na waxay ubaahan tahay sidoo kale waddankeena wixii ka dambeeya maaddaama ay illaa iyo hadda sameeyeen.
Maadaama ay TCDD u baahan doonto waddankeena iyo qurba-joogkaba ka dib maalintaas,
Si aad u noqoto mid si taxadar leh / taxaddar leh oo dhaleeceyn leh oo aan sameyno iyo jumlad kasta oo aan dhisi doono,
Noocyada aan cuno ee machadkan iyo sumcadda ay noo siiyaan waa FARZIDI ...